नोबेलमा पाठेघरको शल्यक्रिया भन्दै आन्द्रा काटेको आरोप, महिलाको मृत्युपछि अस्पतालमा तनाब
समयमा नै मल नपाए पनि प्रदेशमा धान उत्पादन सन्तोषजनक
गुणस्तर ऐनविरुद्ध काम गर्ने पचासी व्यावसायिक फर्म कारवाहीमा
विराटनगर, २७ असोज । नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरका चिकित्सकको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले नाराबाजी गरेका छन् ।
आइतबार नोबेलमा शल्यक्रियाका लागि भर्ना भएकी सोलुखुम्बु नोचासल्यान–४ की ३५ वर्षीया तारादेवी भट्टराईको मृत्यु भएपछि आफन्तले नाराबाजी गरेका हुन् ।
पाठेघरको शल्क्रियाका लागि भर्ना भएकी महिलाको मंगलबार बिहान ७ बजे मृत्यु भएको अस्पतालले आफन्तलाई जानकारी गराएको थियो ।
महिलाको मृत्युपछि आफन्तले लापरवाही गर्ने चिकित्सकलाई कारवाही गर्न माग गर्दै मंगलबार दिनभर आन्दोलन गरेका हुन् ।
एकै दिन दुई वटा अप्रेशन
मृतक महिलाका श्रीमान् ओम भट्टराईका अनुसार पीसीआर जाँचपछि सोमबार शल्यक्रिया गर्ने भन्दै आइतबार तारालाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । सोमबार बिहान साढे ९ बजे डाक्टार शान्ति सुवेदीको टिमले शल्यक्रियाका लागि अप्रेशन थिएटरभित्र लिएर गए । करिब एक घण्टापछि शल्यक्रिया सफल भएकाले आइसियूमा राख्नका लागि लगियो ।
अप्रेशन थिएटरबाट निकाल्दा श्रीमतीको अवस्था सामान्य रहेको उनले बताए । आइसियूमा रहेकी श्रीमतीको तुरुन्त अप्रेशन गर्नुपर्ने भन्दै चिकित्सकको टोलीले सोमबार बेलुका जानकारी गराए ।
हतारमा रहेका चिकित्सकले अप्रेशन थिएटरमा लिएर गएको करिब आधा घण्टापछि अचेत अवस्थामा अक्सिजनसहित बाहिर निकालेर भेण्टिलेटरमा राखे । मंगलबार बिहान मृत्यु भएको जानकारी गराएको ओमले बताए ।
‘पाठेघरको शल्यक्रिया गर्दा आन्द्राको ट्यूमर देखिएको भन्दै चिकित्सकले पाठेघर र ट्यूमर फालेको बताउँदा धन्यवाद दिएँ,’ उनले भने, ‘शल्यक्रियाअघि परीक्षण गर्दा ट्यूमर देखिएको थिएन । चित्सिकले एक्कासी ट्यूमर रहेको बताएपछि छक्क परेँ ।’
ट्यूमर निकाल्ने बहानामा चिकित्सकले बिरामीको आन्द्रा काटिदिएको उनले बताए । ‘बेलुका रगत रोकिएन भन्दै शल्यक्रिया गर्न लिएर गए,’ उनले भने, ‘केही समयपछि अचेत अवस्थामा निकालेर भेण्टिलेटरमा राखे, भोलिपल्ट बिहान मृत्यु भएको बताए ।’
पाठेघरको अप्रेशन गर्दा आन्द्रा काटिदिएका श्रीमतीको मृत्यु भएको बताए । ‘पाठेघरको अप्रेशन भने तर जानकारी नदिई आन्द्रा काटिदिए,’ उनले भने, ‘अस्पताल र चिकित्सकको लापरवाहीले श्रीमतीको मृत्यु भयो ।’
मृत्युपछि उपचारमा लापरवाही गर्नेलाई कारवाहीको माग गर्दै आन्दोलन गरेको उनले बताए । लापरवाही गर्नेलाई कारवाही नभएसम्म बिरामीको शव नउठाउने उनले बताए ।
बोल्दैन नोबेल प्रशासन
अस्पतालको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको आरोप लागेपनि नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । मंगलबार दिउँसो मृतकका आफन्तसँग छलफल गर्ने भनेपनि अस्पताल प्रशासनले छलफल गरेन ।
मेडिकल कलेजका प्रबन्धक दिपेश राईले आफू काठमाडौं भएका कारण केही जानकारी नभएको बताए । अर्का प्रबन्धक नारायण दाहालले घटनाका विषयमा बोल्न चाहेनन् ।
शल्यक्रियामा सहभागी स्त्रीरोग विशेषज्ञ प्रा.डा गेहनाथ बरालका अनुसार मृतक महिलाको पाठेघरमा तेस्रो चरण (स्टेज थ्री) को क्यान्सर भइसकेको थियो ।
पाठेघरको साइडबाट फैलिएको क्यान्सर पिसाब थैली र आन्द्रासम्म पुगेका कारण शल्यक्रिया गरिए पनि बिरामीलाई बचाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘सिटी स्क्यान गर्दा पाठेघरमा ट्यूमर थियो । पछि परीक्षणका क्रममा क्यान्सर देखियो,’ प्रा. डा. बरालले भने, ‘त्यसपछि क्यान्सरकै हिसाबमा शल्यक्रिया गर्दै ट्यूमर फ्यालियो । तर ट्यूमरभित्र तीन लिटर रगत जमेको पाइएपछि हामीनै आश्चर्यमा पर्यौ ।’
फुट्न सुरु भएर ट्यूमरबाट अलिअलि रसाएर रगत पेटसम्मै आइपुगेको उनको भनाइ छ । ‘शल्यक्रियाका लागि समयमा नल्याइएकाले बिरामीलाई बचाउन सकिएन,’ उनले भने, ‘अझ् दुई÷चार दिन ढिलो भएको भए अस्पताल पनि आइपुग्ने अवस्था थिएन ।’ बरालले शल्यक्रियापछि ट्यूमरमा जम्मा भएको धेरै रगत एकै पटक बाहिर निस्कँदा बिरामीको अवस्था गम्भीर बनेको बताए ।